Masinina fanodinana Universal, Mitsangana, Mitsivalana, mpamatsy mpanamboatra China
Eto ianao: an-trano1 / Masinina mihodina mitsivalana mitsivalana - China Manufactur ...
MESINY FAMONDRANA MOMBA NY FIVORIANA ETO AN-TANY ho an'ny fanapahana metaly
Tsinfa dia mpamatsy matihanina & mpanamboatra fitaovana milina any Shina. Ity andiana milina fikosoham-bolo manerantany ity dia maodelin'ny fitaovana milina maro karazana, miaraka amin'ny fahombiazan'ny vidiny lafo tokoa. Ny fahombiazan'ny fanodinana vy dia tena ambony ihany koa.
Amin'ny fomba fijery ny vidiny, rehefa mividy an'ity milina fikosoham-bolo manerantany ity ianao, mitovy amin'ny fividianana milina fanodinana 4: milina fanodinana mitsivalana, milina fanodinana marindrano, milina fitotoam-borona karazana ram, milina fitotoam-bidy rotary izay lohan'ny fikosoham-bary. afaka mihodina 360 degre, mampihena tsara ny vidin'ny vola azonao.Raha ny fahombiazana, raha ampitahaina amin'ny milina fanodinana tsotra, ity andiana milina fanodinana manerantany ity dia manana henjana sy fitoniana tsara kokoa, manapaka bebe kokoa.
Ny milina fanodinana universal dia fitaovana milina miaraka amin'ny fanapahana fikosoham-bary ho an'ny fizotran'ny fikosoham-bary. Ny spindle dia manosika ny mpikapa fikosoham-bary hihodina, ary ny visy firaka kosa dia manosika ny latabatra fiasana hihetsika ankavia sy havanana, ambony sy ambany, mba hikarakarana ny endrika takiana. Ny fitrandrahana milina fikosoham-bary dia malalaka tokoa, afaka manamboatra fiaramanidina marindrano, tampon-tampon-tany, lalan-dàlana, T-groove, alàlan'ny dovetail, fitaovana, tsipika spline, sprocket, faribolan'ny spiral sns. Amin'ny alàlan'ny lohan'ny fikosoham-bary dia azo tanterahina ny milina maro. Rehefa apetraka eo amin'ny vatan-kazo ny bara fanapahana fametahana marindrano, azo atao koa ny manodina famaritana, ary azo fehezina indray mandeha ny fanapahana fikosoham-bilia. Tena mahomby.
Milina fitotoam-bary manerantany amidy, sary, famaritana:
Masinina fanodinana Universal WN736
Haben'ny latabatra （mm）: 1500 * 360
Fitsangatsanganana latabatra: 900 * 320 * 450
Zoro mihodinkodina eo an-doha awivel: ± 360 °
Masinina fanodinana Universal WN736A
Haben'ny latabatra (mm): 1600 * 360
Fitsangatsanganana latabatra: 900 * 300 * 390
Zoro mihodina amin'ny loha mihodina: ± 360 °
Masinina fanodinana Universal WN736C
Haben'ny latabatra (mm): 1600 * 320
Fitsangatsanganana latabatra: 800 * 310 * 420
Masinina fanodinana Universal WN736D
Ny haben'ny latabatra (mm): 2000 * 400
Fitsangatsanganana latabatra: 1200 * 315 * 385
Môtô lehibe (kw): 11kw
Haben'ny latabatra (mm): 1200 * 280
Fitsangatsanganana latabatra: 650 * 200 * 450
Haben'ny latabatra (mm): 1500 * 320
Fitsangatsanganana latabatra: 800 * 300 * 450
Môtô lehibe (kw): 3kw
Masinina manoto volo
Haben'ny latabatra (mm): 1270 * 254
Fitsangatsanganana latabatra X / Y / Z (mm): 700 * 400 * 500
Zoro mihodinkodina eo an-dohodin-doha: ± 45 °
Fitsangatsanganana latabatra X / Y / Z (mm): 900 * 300 * 350
Endri-javatra ny milina fikosoham-bary manerantany:
Ny lohan'ny fikosoham-bary dia afaka mihodina 360 degre
Mihodina mafy ny lohany ary mihodina tsara
Roa - mpanapaka mekanika axis, famahanana mandeha ho azy
Z-axis fananganana herinaratra
Safidy tsy voatery atao: loha fanondroana iraisana, latabatra rotary, fampirantiana dizitaly (DRO), tehina fikosoham-bary
Ny lohan'ny lozisialy manasaraka sy ny axis X dia afaka mahatsapa ny fifamatorana, hanaovana masinina
Inona no atao hoe milina fanodinana? Sombiny, firafitra:
3 Ny toeram-piasana
4 lohan'ny fikosoham-bary
Spindle marindrano 5
6 Tanana fanovana haingam-pandeha
Tsanganana 7 mitsangana
Drafitra famokarana milina fanenjana （Fanaraha-maso kalitao）
1.Amin'ny alàlan'ny famakafakana singa voafetra telo rindrambaiko, ny rafitry ny fitaovana dia voamarina ary havaozina mba hiantohana ny fiorenan'ny firafitry ny fitaovana.
Ny fitsaboana 2.Aging dia entina manala ny adin-tsaina anatiny sy manatsara ny fitoniana
3.Fametahana ny ampahany, manasatra ny milina mankaleo, manodina ny planina azo ampiasaina amin'ny masinina fikosoham-bary, manosotra ary manodina ny faritra iombonanan'ny fitaovana milina ary manamarina ny kalitaon'ireo singa novidiana.
4.Angony araka ny sary fametrahana ny dingana, ary refeso ny marina amin'ny fitaovana fandrefesana
5.Mifandray fitaovana elektrika sy bokotra fandidiana,
6.Aorian'ny fahavitan'ny fitsapana fanapahana sy ny fandrefesana ny masinina iray manontolo
Ahoana ny fampiasana milina fanodinana manerantany
Hamarino tsara fa miorina sy avo lenta ny fototry ny fitaovana milina. Hamarino raha mifanitsy ny famatsiana herinaratra sy ny tanjaky ny herinaratra lehibe amin'ny fampitaovana, ary ampifandraiso ny famatsiana herinaratra.
Hamarino raha toa ny menaka fanosotra dia nohosorana arakaraka ny sary fanosorana sy ireo marika amin'ny fitaovan'ny milina
Ampidiro ny fitaovana ary ampifanarino amin'ny tanana ny latabatra fiasa amin'ny toerana takiana, ahodino ny lohan'ny fikosoham-bary amin'ny zoro ilaina. Ny latabatra fikajiana ny zoro dia afaka manondro ilay boky.
Ny fomba fampitana ny ampela dia ao amin'ny ondrilahy. Amin'ny ankavia na ankavanan'ny ondrilahy dia misy levers miisa telo. Mba hanovana ny hafainganam-pandeha, amboary ny levers shift mba hahitanao hafainganam-pandeha hafa. Fanamarihana: tokony hovaina ny hafainganam-pandeha ajanona ny milina.
Amin'ny fikosoham-bary atsivalana dia apetaho amin'ny spindle marindrano ny fanapahana. Ny masinina koa dia manana fantsom-pamokarana mitsivalana sy bara fanapahana mba hahatsapana ny fiasan'ny fikolokoloana samihafa.
Amin'ny fikosoham-bary, miezaha mampihena ny fitrandrahana ondrilahy sy ny mpanapaka. Rehefa manosotra aorian'ny fanitsiana ny toerana dia tazomy mafy ireo tsiroaroa mihetsika izay tsy ilaina akory ny mihetsika (toy ny ondrilahy, torolàlana lava sy tari-dalana) hanatsarana ny hamafin'ny masinina. Ny hery mitazona dia tsy tokony ho lehibe loatra hisorohana ny fahasimbana.
Ny milina dia nisy bontolo bokotra. Izy io dia miaraka amin'ny bokotra vonjy maika, izay azo tsindriana avy hatrany rehefa miseho ny tsy fetezana. Misy koa ny switch switch hanomboka herinaratra. Aorian'ny fikaroham-bahaolana, hanombohana azy indray, atodiho aloha ny bokotra vonjy maika hamonjy zoro hametrahana azy, avy eo tsindrio ny switch herinaratra hanombohana ny masinina.